Ụmụokorobịa ise ahụ a na-ekwu maka ha bụ ndị e kpere ikpe n'otu ụlọ ikpe ukwu dị na steeti Adamawa, ma ha ikpe ọnwụ, ma kwuo na a ga-eji ụdọ wee kwụgbuo ha, n'ihi na e kwuru na ha tigburu otu onye Fụlani na-achị ehi n'abalị mbụ nke ọnwa Juunu ahọ gara aga (2017), n'ime obodo Kodamun dị n'okpuru ọchịchị Demsa nke steeti Adamawa.
N'ozi ahụ e degaara onyeisi ala, nke isiokwu ya bụ "Arịrịọ Pụrụ Iche Maka Ịgbaghara Ụmụokorobịa Ise Ahụ A Mara Ikpe Ọnwụ", ndị bishọọpụ ahụ kpọkuru onyeisi ala ka o chegharịa echiche azụ, gbaghara ma kwuo ka a tọhapụ ndị ahụ, ma bụrụkwa nke nwetere mbinye aka ọtụtụ ndị bishọọpụ na ndị isi ụka sitere n'ebe dị iche iche n'ụwa gbaa gburu gburu.
Ha sitekwara n'ozi ahụ ha kụpụrụ wee katọọ otú e si eme a họrọ ụmụ ụmụ e gbuo ha ichi ma họrọ ụmụ ụmụ chie ha ọzọ, ọ kachasị n'ebe o metụtara usoro iwu, usoro ọchịchị na okpukperechi n'ala Nigeria, ma kwuo hooha na Okeeke nwanyị dị njọ na ntị maka na ikpe mara eziokwu, aka azụ dị ya.
Ha gosipụtara obi mwute ha na na-agbanyeghị arụrụ ala niile ndị Fụlani na-achị ehi na-arụ n'ala anyị, otú ha si egbusi ma na-akwafukwa ọbara ụmụ mmadụ (ọ kachasị ndị otu Kristi) aka ha dị ọcha, ma na-alakwa akụnụba n'iyi; na o nwebeghị otu onye n'ime ha a kpụpụrụ ụlọ ikpe ma ya fọdụzie ịma ya ikpe ọnwụ.
Ya mere, ha kpọkuru onyeisi ala bụ Buharị ka o chegharịa echiche azụ ma gbaa mbọ hụ na a tọhapụrụ ndị ahụ pụọ na amamikpe ọnwụ ahụ.
Ozi ahụ bụ nke ndị otu a zipuru site n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Texas nke mba U.S, ma bụrụkwa nke ha zigakwaara ọtụtụ ọzọ ndị e ji okwu ha agba izu n'ala Nigeria, nke gụnyere osote onyeisi ala, bụ ọkammụta Yemi Osibanjọ, ọkaikpe ukwu n'ala anyị, bụ Walter Samuel Ọnnọghem; onyeisi ụlọ ọgbakọ Sineeti, bụ Bokọla Saraki; onyeisi ụlọ ọgbakọ nnọchi anya etiti bụ Yakubu Dọgara; ode akwụkwọ izugbe gọọmenti etiti, bụ Boss Mustapha; tinyere gọvanọ steeti Adamawa bụ Mọhammed Jibrilla nakwa ọkaiwu steeti ahụ bụ Silas Bana Sanga.